Ny fahasalamana dia hanara-maso tsara kokoa ny fahasalamantsika amin'ny iOS 15 | Vaovao IPhone
Ny fampiharana ara-pahasalamana dia ny teboka manodidina ny Apple Watch mihodina indrindra ary no fomba anombohan'ny mpampiasa maro hankafizany ny fahaizany, izany no mahatonga ny orinasa Cupertino manohy miloka mafy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fampiharana Fahasalamana mandra-pahatongan'ny teboka vao mainka manintona ny "sportsmen" satria maneho ny tena mahasolo ny famantaranandro hafa natokana.
Apple dia nanisy fampiasa telo amin'ny fampiharana Fahasalamana antsoina hoe: Mobility, Labs ary Walking Steadyness izay hahafahantsika mahatakatra bebe kokoa ny toe-batantsika. Amin'izany fomba izany dia ho marimarina kokoa ny valin'ny fandrefesana ary hahafahantsika manatsara ny zava-bita.
Con mivezivezy Hahita tolo-kevitra marobe isika momba ny fanaovana fanatanjahan-tena ary afaka manampy antsika hijanona amin'ny endrika ilantsika azy indrindra, Apple izao miaraka amin'ny Fahasalamana dia tsy hampahatsiahy antsika ny toe-batantsika fotsiny, fa hanampy antsika hanatsara azy io maimaim-poana amin'ny andiana tolo-kevitra sy famakafakana momba ny fomba fivelantsika isan'andro.
Toy izany koa, Milamina tsy tapaka Hanampy antsika amin'ny famakafakana ireo angon-drakitra hetsika ataontsika, indrindra ny fahasalamantsika. Amin'izany fomba izany dia tsy ny dingana ihany no ho raisina, fa ny halavany ihany koa, ny hafainganana itondrantsika azy ireo ary raha mitohy ny gadona. Azo antoka fa hamela antsika hahazo valiny marina kokoa amin'ny "diantsika" io.
Etsy ankilany, miaraka amin'ny Labs ny fampiharana Health dia hampahafantatra ny mombamomba ny fanadihadihana ataonay any amin'ireo firenena izay "ampifanarahana" ireo laboratoara. Toy izany koa, ankehitriny isika dia afaka mahazo fampandrenesana sy fampahalalana momba ny asan'ny havantsika hanampiana azy ireo hanatsara ny fahasalamany amin'ny alàlan'ny tolo-kevitr'i Apple. ary noho izany dia manatsara ny fampiasantsika ny fampiharana ara-pahasalamana, fa ny an'ny olon-tiantsika koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » WWDC 2021 » Ny fahasalamana dia hanara-maso tsara kokoa ny fahasalamantsika amin'ny iOS 15